Haddii aad xanuusato - Arbetsförmedlingen
Haddii aad xanuunsato ama aad heysid carruur xannaaneyso
Haddii aad xanuunsato adigoo barnaamij meeleyn ka qaybqaata, waxaa muhiim ah inaad soo sheegto isla maalinta ugu horreysa oo aad xanuunsato. Haddii kale waxaad waayi kartaa lacagta meeleynta.
Yaa xanuunka soo sheegaya?
Qofka xanuunsada isagoo ka qaybqaata barnaamij meeleyn oo xanuunkaas awgiis ay suurtageli weydo in uu ka qaybqaato hawlihii loo qorsheeyey.
Goorma ayaad xanuunka soo sheegeysa?
Waxaa lagaaga baahan yahay inaad soo sheegto isla maalinta ugu horreysa oo aad xanuunsato. Haddii kale waxaad waayi kartaa lacagta meeleynta.
Haddii aad ka qaybqaadato barashada af-iswiidhishka ajnebiga (SFI), waxbarasho, tababar shaqo, shaqo ama hawlo kale, waa lagaaga baahan yahay inaad soo sheegto dhammaan wixii maqnaasho ah. Wixii ka dambeeya 7 maalmood oo xanuun ah waxay Försäkringskassan kaaga baahan tahay warqad dhakhtar si go’aan looga gaaro lacagta lagu siinayo.
Haddii aad xanuun ku jirto muddo dheer, waxaan ku dadaaleynnaa inaan qaybaha barnaamijkaas u habeynno hab uga qaybqaadan karto. Barnaamijka waa lagaa saarayaa haddii aad xanuun ku maqan tahay muddo ka badan 30 maalmood.
Waxaad xanuunka ku soo gudbin kartaa bartayada internet.
Soo sheeg maqnaashada
Waa immisa lacagta aan helayo haddii aan xanuunsado?
Maalinta ugu horreysa ee aad xanuunsatid wax lacag ah ma heleysid. Waxaa loogu yeeraa maalinta lacag la’aanta ah Haddii aad xanuunka soo sheegtid maalinta ugu horreysa ee aad xanuunsatid, maalmaha waad heleysaa kaalmada lacageed ee saldhigashada.
Haddii aad u baahantihid in aad guriga joogtid si aad carruur xanuunsaneysa u daryeeshid
Haddii aad u baahantihid in aad guriga joogtid si aad u daryeeshid carruur xanuunsatay waxaad u baahantahay in aad na soo wargelisid. Samey taas sida ugu dhakhsi badan ee suurta gal ah si aadan khatar ugu gelin aad lumisid kaalmo lacageed. Sida ugu fudud waa in aad maqnaashadaada ku soo sheegtid barteenna intarneetka, ama la soo xiriirtid adeeggeenna macaamiisha.
Marka aad Qasnadda ceymiska ka dalbaneysid kaalmo lacageed oo saldhigasho waa in aad ku buuxisaa in aad maqneeday.
Haddii aad shaqeysid isla mar ahaanna aad ka qeyb qaadaneysid barnaamijka saldhigashada, waxaa ku khuseeya xeerar kale haddii aadan shaqeyn karin iyadoo ay sababtu tahay in aad xanuunsantihid ama aad u baahantihid in aad daryeeshid carruurtaada oo xanuunsaneysa. Wax dheeraad ah ka akhriso barta intarneetka ee Qasnadda ceymiska.